Admin-Khun | ပြည်ထောင်စုထဲက ''ပအိုဝ်း''
Last 30 days: 8,650
Admin-Khun	← Go to the Next Page
ထားဝယ်ရေနက် စီမံကိန်း ပြီးစီးသွားပါက ..Published May 6, 2013 | By Admin-Khun	Posted in သတင်းများ | Leaveacomment	Soya Bean (ခေါ်) ပဲပုပ်ပဲနှင့် အခွင့်အလမ်းPublished May 6, 2013 | By Admin-Khun	အင်္ဂလိပ်လို (Soya Bean) လို့ခေါ်တဲ့ (ပဲပုပ်ပဲ) ပေါ့ .. နောက်ပြီး (ပဲကျပ်ပျဉ်)လို့ အချို့မြန်မာ့အဘိဓါန်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်နဲပဆိုရင် (SoyBean)ပေါ့ဗျာ။ ဒီပဲပုပ်ပဲနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တောင်သူလယ်သမားတွေကို တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နှားနဲ့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရင် အခွင့်အလမ်း ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ခရီးသွားရင်း လေ့လာမိသမျှတွေကို ပြန်မျှဝေချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ နေဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင် ပဲပုပ်ပဲ (ခေါ်) Soya Bean နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်တောင် များတယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ Super Market တစ်ခုထဲကို သွားလိုက်ရင် –
(၁) Soya Bean Oil စားသုံးဆီ
(၂) Soya Milk ခေါ်ပဲနို့ရည်
(၃) ပဲပုပ်ပဲနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ တိုဖူးဖြူ
(၄) ပဲပုပ်ပဲမှ ပဲနို့ထုတ်ပြီးတော့ ထွက်လာတဲ့ ပဲဖတ်တွေကို ငါးမုံ့ပုံစံနဲ့ ပြန်အသုံးပြုခြင်း
(၅) ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ Soya or Soy Sauce ပဲငံပြာရည်တွေ၊ ကြာညို့တွေ .. အစရှိသည်ဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ လူဦးရေ အဆမတန် တိုးပွားမှု၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစားသောက်ရှားပါးမှုတွေနဲ့ စတင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ စားသောက်ကုန်နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ တစ်ကယ့်အခွင့်ရေးကောင်းလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာဆိုရင် ပဲပုပ်ပဲလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ခုပြောရရင် ၂၀၁၁-ခုနှစ် ကျွန်တော်စင်္ကာပူမှာ ရှိစဉ်အခါတုန်းက သတိထားမိတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ့… အရှေ့တောင်အာရှမှာ လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဆိုတာက မူဆလင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်.. ။ မူဆလင်လူမျိုးများရဲ့ (အစ်) ဥပုဒ်ကာလအချိန်အခါလေးပေါ့။ အဲဒီလိုကာလမှာဆိုရင် သူတို့တွေက သတ်သတ်လွတ် စားကြတာ များပါတယ်။ တစ်နေကုန် မစားမသောက် တွံတွေးတောင် မမျိုချရတဲ့ ဥပုဒ်ပေါ့ .. ။ အဲတော့ Soya Bean နဲ့လုပ်ထားတဲ့ တိုဖူးဖြူကို အစဉ်အလာ တစ်ခုအနေနဲ့ ဆွဲပြီး စားခဲ့ကြတာပေါ့ .. ။ အသားမစားတဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းကို ဖြည့်စည်းပေးနိုင်တာက ပဲကနေရတဲ့ (ပရိုတင်း)ဓါတ်ဆိုတော့ .. ။ အဲဒီမှာ ဖြစ်ချင်တော့ .. အဲဒီ(အစ်)ကာလမှာကိုပဲ Soya Bean ထုတ်ကုန် ပြတ်လတ်မှုနဲ့ သူတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး အစိုးရကို ဆန္ဒအကြီးအကျယ် ပြခဲ့ကြတယ် .. ။ အဲဒီတုန်းက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အစိုးရကနေပြီးတော့ အမေရိကန်ကနေ တင်သွင်းလာတဲ့ Soya Bean တွေကို အခွန်တိုးကောက်တဲ့အတွက် တင်သွင်းမှု လျှော့ကျပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကို အထိနာသွားခဲ့တာပေါ့။ ရှားပါးမှုတွေ ဖြစ်လာတော့ .. ဈေးတွေလည်း တက်လာ .. လူတိုင်းမစားနိုင်၊ စားချင်တိုင်းလည်း ရှားပါးမှုဖြစ်နေတော့ .. အစိုးရကို ဆန္ဒပြပြီး အခွန်ကို ပြန်ဖြေလျှော့ခိုင်းခဲ့ရပါတယ်။
Posted in သတင်းများ | Leaveacomment	အသက်ကွာခြားပုံ ကာတွန်း :DPublished May 5, 2013 | By Admin-Khun	Posted in သတင်းများ | Leaveacomment	အလှူငွေ လိုအပ်လျှက်ရှိနေသော ပညာဥယျာဉ် ပရဟိတကျောင်းPublished May 4, 2013 | By Admin-Khun	၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ နှစ်သစ်ကူး မဟာသင်္ကြန်တွင်း ရိုးရာဓလေ့အရ ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ ချိန်ခါမှီ ဓမ္မလုံးကောင်ကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပညာဥယျာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ ပရတိတကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိတဲ့အကြောင်း၊ အလှူငွေများ အရေးတကြီးလိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်း ဆရာတော်ကြီးထံမှ သိရှိရပါတယ်။ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရတိတကျောင်းရဲ့ တည်နေရာကတော့ တောင်ကြီးမြို့တောင်ဖက်၊ ကျောက်တလုံးလမ်းအတိုင်းသွားပြီး ပန်သခွါးရွာ၏တောင်ဖက် … လမ်းအရှေ့ဖက် သဲတောင်ကုန်းပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ မိတ်ဆွေများ အကယ်လို့ ကျောက်တလုံးလမ်းအတိုင်း မွေတော်ကက္ကူ; သို့သွား၍ဖြစ်စေ .. ပန်သခွါးရွာအကျော် လမ်းဘေးတွင် အလှူခံနေသော ပရဟိတလူငယ်များကို တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ .. ကြုံတောင့်ကြုံခဲ လူ့ဘ၀မှာ ယခုလိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ တိုင်းပြည်ပညာရေး အခန်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူငယ်သားကောင်းများဟာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ကုသိုလ်ယူ ပါဝင်လှူဒါန်း ကြရအောင်ခင်ဗျာ။ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများ ပါဝင်လှူဒါန်း နိုင်ကြရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ အခုလို တိုက်တွန်းနိုးဆော် လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
အသေးစိပ်အချက်လက်ကို ကျွန်တော်တို့ ပူးတွဲတင်ပြထားပါတယ်။ အောက်ပါ အချက်လက်များကို ထပ်ဆင့် မျှဝေပေးကြပါခင်ဗျာ.. ။
ကျွန်တော်တို့ ခွန်ပအိုဝ်းမှတစ်ဆင့်လည်း ပါဝင် ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း .. Posted in သတင်းများ | Leaveacomment	ဖန်ဆင်,မွဉ်းဖျင် ဥယျဉ်;ခြံPublished May 4, 2013 | By Admin-Khun	ဖန်ဆင်,မွဉ်းဖျင် ဥယျဉ်;ခြံ ဆိုတဲ့ ပအိုဝ်းဗွီဒီယို ဇာတ်လမ်းအခွေလေး မကြာမှီ ထွက်ပါတော့မည်တဲ့.. ။ နောင်တရား (ခြမ်ဒုံ)မှ ဒါရိုက်တာ ခွန်သစ္စာမှ စီစဉ်ရိုက်ကူးထားပါသည်။
Posted in သတင်းများ | Leaveacomment	မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တစ်ကယ်ပဲ ၀င်ရောက်နေပြီလား ??Published May 4, 2013 | By Admin-Khun	Ford ကားကုမ္ပဏီမှ မကြာမှီ မြန်မာပြည်ဈေးကွက်သို့ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း .. ။ အလုပ်ကိုင်များ ဖန်တီးမည်ဘာညာ ကွိကွ .. ။ ထိုနည်း၎င်းပဲ KIA လို ကိုရီးယား မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီကလည်း ရန်ကုန်မှာ Showroom ကားအရောင်းပြန်ခန်း ဖွင့်ကြတော့မယ်ပေါ့ ။ ကားေ၇ာင်းတာကတော့ .. ဘာနည်းပညာမှ သိပ်မလိုပဲေ၇ာင်းလို့ရပါတယ်ကွာ.. ။ မြန်မာအလုပ်သမား ဘယ်လောက် ခန့်နိုင်မှာမို့လို့လဲ .. ။ ကားထုတ်တာမှ မဟုတ်တာ.. ။ <မြန်မာပီပီ ဘုပဲ> Mega Life Science မှလည်း နိုင်ငံခြားဖြစ် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း … ။ Mega Life Science မှ စားသောက်ကုန်များ၊ လူသုံးကုန်များ၊ ဆေးဝါးများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ တင်သွင်း .. အခြား Global Brand များကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းကြောင်း … ။ ထိုင်းအခြေစိုက် Mega ၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အကျိုးအမြတ်မှာ ထိုင်းဘတ် (7 billion) ရှိပြီး ၃ပုံပုံလိုက်ရင် (၁)ပုံက မြန်မာပြည်မှ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ကြောင်း..။
အခြား Garment Sector တွေ စားသောက်ကုန်တွေ ကလည်း ထိုင်း၊ တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့စ်တို့မှာ Manufacture ထုတ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို တင်သွင်းတာများကြောင်း… ဆက်လက်တင်သွင်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ။ ယခုလက်ရှိ မြန်မာပြည်လို သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ Hot ဖြစ် ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်လို နိုင်ငံတောင် မြန်မာပြည်ကို တင်သွင်းတဲ့ထဲမှာ တော်တော် ပါဝင်လာကြောင်း.. ။
ဟိုဒင်း ကုမ္ပဏီမှလည်း .. ဟိုဒင်း Products ကို မြန်မာပြည်သို့ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ .. [ ဟူး ... ဘယ်ကုမ္ပဏီမှ အခုထိ မြန်မာပြည် အခြေစိုက်ထုတ်ဖို့ မစဉ်းစားကြဘူး ... လာလိုက်ရင် တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးမယ် .. ရောင်းမယ်ဆိုတာကြီးပဲ .. ဒီပုံစံနဲ့ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ ဘယ်လို လည်ပတ်ကြမလဲနော် ... ။ ဆန္ဒစောတာ မဟုတ်ပါဘူး .. မသိလို့ တွေးကြည့်တာပါ ... ]
P.S: ယခုလက်ရှိ အခြေနေကို ကြည့်နေတာ… မြန်မာပြည်ကို ၀င်လာတဲ့သူတွေက.. ရောင်းမယ့်သူတွေချည်းပဲဖြစ်နေတယ် .. ပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင် ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်းမှာ လာလုပ်ဖို့ သိပ်မစဉ်းစားကြဘူး .. နောက်ပြီး Infrastructure ကောင်းတဲ့ ထိုင်းလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက သူတို့ရဲ့ Manufacture Plant တွေကို အသုံးချပြီး လှမ်းသွင်းနေကြတယ် .. ။ ဒို့ဆီက သယံဇာတလေးတွေ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်တွေ ရောင်းစားပြီး ကျန်တာ ပြန်ဝယ်စားနေရတယ်။ အဲဒီသယံဇာတတွေကို အိမ်နီးချင်းများ စုပ်ယူလို့ ကုန်သွားတဲ့တစ်နေ့ .. Hot နေတဲ့ ဒို့မြန်မာ .. ဘယ်ဘ၀ေ၇ာက်မယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားရဲပါဘူး … ။ အမိမြန်မာပြည်ကြီးမှာ အခြေခံ အဆောက်အဦ မရှိပဲနဲ့တော့ ရေရှည်မလွယ်ဘူး .. ။ အခုချိန်ထိေ၇ာင်းမယ့်သူကလွှဲလို့ ကျန်တဲ့သူ လာမှာ မဟုတ်လောက်သေးဘူးထင်တယ်.. … ဟူး ….. ….
Posted in သတင်းများ | Leaveacomment	မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပလူပျံနေတဲ့ ထိုင်းနှင့်တရုတ် Product များPublished April 27, 2013 | By Admin-Khun	အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိတော့ ဒို့မြန်မာတွေ ပြည်ပကနေ ဘုမသိဘမသိ (ထိုင်းစာ၊ တရုတ်စာတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့) ဆေးဝါး၊ စားသောက်ကုန်နဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ယူ စားသုံးနေရအုံးမှာပဲ .. ။ တစ်ကယ်တမ်းတော့ (မြန်မာပြည်မှာေ၇ာင်းချင်ရင် စားသုံးသူ နားလည်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ (သို့မဟုတ်) မြန်မာစာနဲ့ ရေးမှ ရောင်းရတာ) ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးပါဆိုတဲ့ စကားက အခုချိန် သိပ်မမှန်သေးဘူး .. ။
လမ်းသွားရင်းနဲ့ တွေ့တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကေ…ပြာတယ်.. ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် .. ပြည်တွင်းဖြစ်က ယုံကြည်စိတ်ချမှု မရှိလို့ပါတဲ့ .. ။ ဥပမာ .. မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ပြည်တွင်း စားသောက်ကုန်တစ်ခုက မသုံးသင့်တဲ့ ဆိုးဆေးတွေ ဓါတုဗေဒတွေ ပါလာလို့ .. မြန်မာ FDA က ပိတ်ပင်လိုက်ရင်… အခြားနာမည်နဲ့ လာဒ်ထိုးပြီး ပြန်တက်လာတာပါပဲတဲ့ .. ။ အဲတော့ … ပြည်ပက စိတ်ချတဲ့ဟာတွေပဲ ၀ယ်ယူ စားသုံးရတာပေါ့တဲ့ .. ဒါကလည်း ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်တွေပါပဲ .. ။
တစ်ကယ်တမ်းတော့ မြန်မာနိုင်ငံ FDA facility ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို (ထိုင်းတို့ တရုတ်တို့လို) အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေက သိပြီးသားပါ .. အဲဒါကြောင့် Export only to Myanmar Product တွေ ထွက်လာတာပေါ့ .. .ဥပမာ .. LEO တို့ Beer Chang တွေ ပြီးတော့ တရုတ်ဘီယာတွေဆိုရင် .. only for export to Myanmar တွေ Dedicate လုပ်ပြီး ပို့တာတွေတောင် ရှိလာခဲ့တာပဲ .. ။ တောင်ပေါ်ဒေသအထိပါ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် လာကြတယ်.. ။ ဈေးပေါတယ် … ဒါပေမယ့် Brand ချင်းတူရင်တောင် မြန်မာပြည်ဝင်တဲ့ဟာက ဘယ်လိုဟာမှန်း မသိတာအမှန်ပဲ .. အခုနောက်ပိုင်းမှ မသိမသာလေး ပြန်ပျောက်သွားပြီး … အစစ်တွေ စတင် ပို့လာတာပါပဲ .. ။ နယ်စပ်မှာနေတဲ့သူတွေ သိကြပါတယ်… . ။
မြန်မာပြည်မှာက Make or Buy ဆိုရင်ရင် Buy တွေသိပ်များတယ်.. ဘယ်ကနေ ၀င်ငွေတွေ ဘယ်လိုရှိလဲ ကြည့်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြား ၀င်ငွေဆိုလို့ .. နိုင်ငံခြားသွားပြီး အလုပ်လုပ်လို့ ရလာကြတာပဲ ရှိတယ်.. ကျန်တာက တိုင်းပြည် သယံဇာတ (Raw Material) ကုန်ကြမ်း ပို့လို့ ရတာပဲ များတယ်.. ။ ကုန်ကြမ်းပို့ပြီး ကုန်ချောက ကိုယ့်ဆီကို ပြန်အထည့်ခံရတဲ့ မိအေး နှစ်ခါနာ ဇာတ်လမ်းတွေ ပုံစံတွေလည်း ရှိတယ်ပေါ့လေ.. ။ အိန်း .. ရှိစေတော့ … အမိမြန်မာပြည် Infra မြန်မြန်ကောင်းပြီး … ပြည်တွင်းဖြစ် ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေတွေ၊ ၀င်ငွေတွေကို ပြည်တွင်းမှာပဲ .. ပြန်လည်လည်ပတ်စီးဆင်းတဲ့ တစ်နေ့ .. တို့တစ်တွေ သိပ် မျက်နှာ မငယ်ကြရလောက် တော့ပါဘူးနော … … တွေးကြည့်တာပါ .. တွေးကြည့်တာ ..
Posted in သတင်းများ | Leaveacomment	← Go to the Next Page